जान्नुहोस् कुन रक्तसमुह भएका व्यक्तिमा कस्तो किसीमको क्षमता हुन्छ त ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/जान्नुहोस् कुन रक्तसमुह भएका व्यक्तिमा कस्तो किसीमको क्षमता हुन्छ त ?
काठमाडौँ । मानिसमा विभिन्न किसिमका रक्त समूहरू हुन्छन् । ए पोजेटिभ, ए नेगेटिभ, बी पोजेटिभ, बी नेगेटीभ, एबी पोजेटिभ एबी नेगेटिभ, ओ पोजेटिभ र ओ नेगेटीभ । भनिन्छ यही रक्त समूहको आधारमा मानिसको प्रकृति र क्षमता पनि केही हद सम्म पत्ता लगाउन सकिन्छ ।जुन व्यक्तिको रक्त समूह ए पोजेटिभ हुन्छ उनीहरूमा राम्रो नेतृत्व क्षमता हुन्छ । ए पोजेटिभ रक्त समूह भएका व्यक्तिले राम्रो नेतृत्व गर्न सक्छन् । उनीहरू सबलाई साथ र विश्वासमा लिएर हिड्ने कुरामा सफल हुन्छन् । यदि तपाईंको रक्त समूह ए पोजेटिभ छ भने तपाईं ए पोजेटिभ, ए नेगेटिभ, ओ पोजेटिभ र ओ नेगेटिभ रक्त समूहको रगत लिन सक्नुहुन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
बी नेगेटिभ भएका व्यक्तिलाई बी नेगेटिभ र ओ नेगेटिभ रक्त समूह भएका व्यक्तिको रगत दिन सकिन्छ । एबी पोजेटिभ रक्त समूह वाला व्यक्तिलाई बुझ्न सजिलो हुँदैन । उनीहरू कुनबेला के सोच्छन् भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा पाउन सक्तैन । किनभने उनको प्रकृति कहिले पनि एक किसिमको हुँदैन । एबी पोजेटिभ रक्त समूह युनिभर्सल रिसिभर हुन्छ । यसको मतलब उसलाई जुनसुकै रक्त समूहको रगत पनि दिन सकिन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
ओ नेगेटिभ रक्त समूहका व्यक्तिको सोच एकदम संकीर्ण हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू केवल आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छन् । यिनीहरू संकीर्ण मानसिकता वाला हुन्छन् । यिनीहरू नयाँ विचारलाई सजिलै स्वीकार्न सक्तैनन् । ओ नेगेटिभ भएका व्यक्तिले केवल ओ नेगेटिभ रक्त समूहको रगत लिन सक्छन् ।